Barnaamijyo Degree Debecsan & Aqoonsi ah »Jaamacadda Hodges
Categories: Tilmaamaha internetka
Waxaan Ku Jirnaa Hormoodka Waxbarashada Onlineka ah!
Jaamacadda Hodges, waxaan aqoonsan nahay in barashada adduunka maanta ee shaqada badan iyo jadwalka qoysku ay ka dhigi karto inay u muuqato mid caqabad ku ah dib ugu noqoshada dugsiga. Taasi waa sababta aan dib-u-habeyn ugu sameynay in badan oo ka mid ah barnaamijyadeena xarunta si looga qaado internetka. Dabacsanaanta inta aad shahaadadaada gaadheyso ayaa ah sida ugu wanaagsan ee aad ugu guuleysan karto, waana ognahay. Waxbartayaasha kale ee qaangaarka ah waxay soo mareen isla dariiqa aad ka fikirayso waxayna ku heleen guushooda barnaamijyada shahaadada internetka ee Hodges.
Barnaamijyada ugu sareeya ee khadka tooska ah
Faa'iidooyinka Kaqeybgalka Hodges U Darajadaada ama Shahaadadaada internetka
Sababtoo ah waxaan u qorsheynay dariiqyadayada shahaadada ee bartayaasha khadka tooska ah, waxaad ka heli doontaa faa'iidooyin ka sarreeya jaamacadaha kale ee internetka.
Professors ayaa diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalahaaga. Waxaan nahay jaamacad adeeg buuxda leh oo bixisa barnaamijyo dhaqameed iyo kuwa khadka tooska ahba. Kulliyadeenu waxay isu diyaariyaan inay ka jawaabaan su'aalahaaga oo kaa caawiyaan inaad guuleysato. Dheeraad ah, macalimiinteennu waxay dhaafeen shuruudaha adag ee barista ee looga baahan yahay aqoonsi gobol iyo barnaamij.
Barnaamijyadayada shahaadada waxaa si buuxda loogu farsameeyay ardayda waaweyn. Dabacsanaanta barnaamij kasta waa waxa inaga dhiga mid aan gaar aheyn. Kaliya ma nihin jaamacad bixisa koorsooyin onlayn ah. Waxaan nahay jaamacad u heellan guushaada.
Kama jabi doontid tayada si aad ugu fududaato. Waxaan nahay jaamacad internetka laga aqoonsan yahay oo heer gobol ah. Aqoonsiga gobolku waa mid adag oo u baahan natiijooyinka ardayda ee ka sarreeya heerarka aqoonsi qaran. Hodges U, waxaad ku heleysaa waxbarasho fiican.
Macallimiinteennu waxay leeyihiin khibrad-dhab ah. Waxay ku siin karaan xirfado aad ku dabakhi karto xirfadaada hada. Ku bilow adeegsiga xirfadaha aad maanta baraneyso.
Canvas waa barxadda internetka ee aan u isticmaalno bixinta koorsada internetka, taasoo ka dhigaysa isdhexgalka asxaabta iyo taageerada waxbarista si fudud loo heli karo. Fariimaha degdega ah, saacadaha xafiis ee macallimiinta, muxaadarooyinka la duubay, iyo awoodaha shirarka ee waqtiga dhabta ah ayaa dhammaantood laga heli karaa waayo-aragnimada barashada internetka ee Jaamacadda Hodges.
Isbadal ku samee mustaqbalkaaga naftaada ayaa kaaga mahad celin doona. Ka bilow khadka tooska ah maanta!
Foomamka Bixinta Shahaadada iyo Shahaadada
Jaamacadda Hodges, inbadan oo shahaadooyinka kulliyadeena ah ayaa gabi ahaanba laga heli karaa khadka tooska ah. Waxaan diyaarinnay liistada Master-ka, bachelor-ka, la-hawlgalayaasha, iyo barnaamijyada shahaadaynta ee laga yaabo in laga qaado internetka, meel kasta oo ka mid ah 49-ka gobol ee aan u adeegno.
Diyaar Ma U Tahay Barashada Internetka?
Barashada khadka tooska ah waxay u baahan tahay maskax wanaagsan iyo go'aaminta in la arko hawl illaa dhameystir. Waan ku rumaysan nahay, waana ognahay inaad haysatid waxa ay kugu qaadanayso inaad ku barato internetka. Laakiin baahiyo badan oo waqtigaaga ku saabsan, waa lagama maarmaan in la hubiyo inaad si buuxda u fahamto waxa ku jira barnaamijka internetka. Barashada khadka tooska ah ma sahlana, laakiin xaqiiqdii waxay noqon kartaa xulasho sare oo kuu oggolaanaysa inaad dhammaystirto yoolalkaaga waxbarasho ee sare.
Fahmaan waxa loola jeedo noqoshada barta internetka. Dabacsanaanta ayaa fure u ah barashada internetka. Waad baran kartaa hareeraha shaqadaada iyo jadwalkaaga qoyska, waqtiga aad haysato inta lagu jiro nasashadaada qadada iyo kahor ama kadib shaqada. Laga yaabee adiga, waa subaxa hore ama ka dib markay dadka kale seexdaan. Wax kastoo jadwalkaaga ah, waxaa suurtagal ah in lagu qaato fasalo onlayn ah. Koorsooyin khadka tooska ah oo isku mid ah, iskumid ah, tiknoolajiyad la xoojiyay, simulcast, iyo muxaadaro toos ah ayaa dhammaantood laga heli karaa gudaha waxbarashada sare. Waxa jiri kara xoogaa caqabado ah, sidoo kale. Barashada qadka tooska ah waxay qaadan kartaa waqti ka badan barashada dhaqanka (tusaale: fasal hal saac ah oo muxaadaro iyo wada hadalo isku badali karaan waqti dheeri ah khadka tooska ah kadib markaad aqriso muxaadarada oo aad qorto qodobadaada doodda si dib loogu eego macalinka). Haddii aad caadi ahaan u baahan tahay xoogaa jihada ka socota borofisarka, barashada internetka ayaa laga yaabaa inay ka dhib badan tahay jawiga waxbarasho ee isku dhafan. Waxaan bixinaa habab badan oo lagu barto; dooro midka kugu habboon.
Astaamaha ka dhigaya kuwa barta internetka ku guuleysta ay ka mid yihiin xirfadaha isgaarsiinta qoraalka oo aad u wanaagsan, awoodda akhriska iyo fahamka maadada si deg deg ah oo hufan, xirfado xisaab adag, awood (iyo rabitaan) inaad si madaxbanaan ugu shaqeyso kormeer la'aan, iyo inaad sifiican iskaga warqabto si aad u aragto wadadaada mustaqbalka inta aad ku adkeyso caqabad. Waxaad ubaahantahay karti aad uhesho jadwalka waqtiga aad wax baranayso iyo inaad raacdo qorshahaaga loogu talagalay xitaa markay wax soo baxaan oo kaa leexin kara. Ha ka welwelin haddii qaar ka mid ah xirfadahan ay u muuqdaan kuwo xad dhaaf ah. Shaqaalaheennu waxay halkan u joogaan inay ka dhigaan wax-barashada qof walba fursad.
Awood u leh inuu xiriir wanaagsan la yeesho shakhsiyaadka la midka ah inta uu internetka ka baranayo. Way fududahay inaad guuleysato markaad haysato nidaam taageero oo qumman oo kaa caawiya barnaamijkaaga barashada ee internetka. Waxaad la kulmi doontaa caqabado qaarkood, mid walbana oo ka mid ah ayaa u qalmi doona markii aad shahaadadaada gacanta ku hayso. Haysashada tusaalooyin wanaagsan iyo nidaam taageero oo ku siin kara wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u gaarto yoolkaaga dhammaadka ayaa muhiim u ah guushaada. Waad heshay tan!
Ogow dhiirigelintaada. Sababaha aad u go'aansatay inaad ka qeyb gasho iskuulka khadka tooska ah waxay saameyn ku yeelan doontaa awooddaada waxbarasho. Ogow oo faham fahamkaaga dhiirrigelinta doorashada dib ugu noqoshada dugsiga iyo barashada khadka tooska ah. Dad badan, barashada khadka tooska ah waxay u oggolaaneysaa inay sii wadaan shaqada inta ay raadinayaan tacliinta sare si ay u helaan dakhli badan. Ku hayso dhiirigelintaada safka hore si aad u xusuusato markii ay waxbarashadu u muuqato daal ama shiid. Waxaad ku maalgashan doontaa naftaada iyo naftaada labadaba barnaamijka khadka tooska ah. Waqtigaagu waa mid ka mid ah maalgashiyada ugu waaweyn ee aad samayn doontid. Dadaalka aad gelisay barashadaada tooska ah waxay si toos ah ugu xirmi doontaa sida ugu wanaagsan ee aad wax uga qabato koorsooyinkaaga. Waxaad sidoo kale naftaada u samayn doontaa ballan qaad maaliyadeed. Maalgelinta lacagta ee waxbarashadaada ayaa ku siin doonta lacag celin badan dhamaadka. Waan ognahay inaad sameyn kartid, iyo qoto dheer, sidaas oo kale adiguna!
Faahfaahinta iyo Shuruudaha Ogolaanshaha Ardayda ee Onlineka ah
Jaamacadda Hodges kuma takooreyso midab, midab, diin, jinsi, nooca galmada, dhalashada, da'da, ama naafonimada bixinta fursadaha waxbarasho ama fursadaha shaqo iyo faa'iidooyinka. Dhammaan xubnaha bulshada Jaamicadda si isku mid ah ayaa loo qiimeeyaa. Jaamacadda Hodges kuma takooreyso jinsiga ama naafanimada barnaamijyada waxbarashada iyo howlaha ay wado, iyadoo la raacayo shuruudaha dhammaan qaanuunka federaalka iyo gobolka iyo xeerarka ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, Cinwaanka IX ee Wax-ka-beddelka Waxbarashada ee 1972 , Qeybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta ee 1973, iyo Sharciga Naafada Ameerika ee 1990. Siyaasadani waxay gaarsiisantahay shaqaalaynta iyo gelitaanka Jaamacadda Hodges.
Weydiimaha ku saabsan Cinwaanka IX, waa in lagu hagaajiyaa Isuduwaha Title IX:
Kelly Gallagher, Isuduwaha Title IX 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966
Tababbarka Cinwaanka IX waa la heli karaa halkan.
Weydiimaha ku saabsan Sharciga Naafada Mareykanka waa in lagu hagaajiyaa Isuduwaha ADA:
Josh Carcopa, Agaasimaha Waaya-aragnimada Ardayda.
Weydiimaha boostada waa in loo diraa Xarunta Fort Myers ee cinwaanka soo socda: Jaamacadda Hodges, Attn: Isuduwaha ADA, 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966.
Jaamacaddu waxay xaq u leedahay inay u diiddo gelitaanka codsade markii ficilkan oo kale loo arko inuu yahay danta ugu wanaagsan ee codsadaha ama jaamacadda. Jaamacadu ma aqbasho codsadayaasha rabshadaha ama dambi galmo galmo ku xukuma barnaamijyadooda waxbarasho. Codsadeyaasha kale ee wata diiwaanka dembiga culus waxay buuxin karaan Foomka Racfaanka ee dembiga, oo ay dib u eegeen guddi-hoosaadka Guddiga Amniga Jaamacadda. Guddi hoosaadka, oo goaankiisu yahay kan ugu dambeeya, ayaa go'aamin doona awooda murashaxa inuu horay ugu sii socdo howlaha ogolaanshaha.
Hindisayaasha Waxbarshada tooska ah ee jaamacadda waxaa kormeera hoggaanka tacliimeed ee dugsi walba oo kormeera isdhexgalka koorsooyinka iyo barnaamijyada nidaamka waxbarashada. Koorsooyinka internetka iyo barnaamijyada waxaa lagu soo bandhigaa iyadoo la adeegsanayo Canvas, nidaamka maamulka waxbarashada jaamacadda. Ardayda qaadata koorsooyinka khadka tooska ah waxaa looga baahan yahay inay bartaan maaddada 'Canvas platform' ka hor intaysan bilaabin koorsooyinkooda.
Dhammaan koorsooyinka onlaynka ah ee lagu barto Jaamacadda Hodges waxay u baahan karaan imtixaan kama dambeys ah oo la sii daayo. Ardayda waxaa looga baahan yahay inay galaan imtixaannada ugu dambeeya (oo u baahan kamarad webka) inta lagu jiro taariikhaha ku qoran bogga MyHUgo Koorso kasta oo khadka tooska ah waxay leedahay ujro tijaabo ah oo laxiriira (fadlan tixraac jadwalka waxbarashada iyo khidmadaha ee Shuruudaha iyo Xaaladaha Diiwaangelinta)
Ardayda waxbarashada tooska ah / waxbarashada fog waxay bilaabi karaan cabasho iyaga oo u soo diraya e-mayl onlinelearning@hodges.edu. Ardayda waxbarashada tooska ah / waxbarashada fog ee dhammeystiray geeddi-socodka cabashada Jaamacadda Hodges iyo nidaamka cabashada gobolka ee ku habboon ayaa rafcaan ka qaadan kara cabashooyinka aan waxbaridda lahayn ee Heshiiska Dib-u-oggolaanshaha Oggolaanshaha Oggolaanshaha Gobolka Florida ee Dugsiga Sare ee Isku-xirka Dib-u-heshiisiinta Fogaanta Labaad (FL-SARA PRDEC) Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habka cabashada, fadlan booqo Nidaamka Cabashada ee FL-SARA .
Siyaasadaha soo socda ee khuseeya (Xuquuqda iyo Waajibaadka Ardayga iyo Siyaasadda Cabashada Ardayga) waxaa lagu daabacay Buug-gacmeedka ardayga Jaamacadda Hodges oo laga heli karo halkan.
Shuruudaha Barashada Onlineka
Eeg Liistadayada Gaarka ah ee Ku Saabsan Barashada Internetka